Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil oo booqashadiisii ugu horeysay ku tegey Imaaraadka Carabta | Arrimaha Bulshada
Home News Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil oo booqashadiisii ugu horeysay ku tegey Imaaraadka Carabta
Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil oo booqashadiisii ugu horeysay ku tegey Imaaraadka Carabta
Monday, December 13, 2021 News
Bulsha:- Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil Naftali Bennett ayaa gaaray dalka Isutagga Imaaraadka Carabta si uu ula kulmo hogaamiyaha dowladda Khaliijka, waana booqashadii ugu horreysay ee abid uu Imaaraadka ku tago ra’iisul wasaaraha Israa’iil.
Bennett ayaa la kulmi doona dhaxal-sugaha Amiir Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan Isniinta inta lagu guda jiro booqashada heerka sare ah, xafiiska Bennett ayaa lagu yiri bayaan.
“Hogaamiyuhu waxa uu ka wadahadli doonaa sii qoto dheeraynta xiriirka Israel iyo UAE, gaar ahaan arrimaha dhaqaalaha iyo gobolka,” ayaa lagu yiri bayaanka.
“Tani waa booqashadii ugu horreysay ee rasmi ah oo ra’iisul wasaaraha Israa’iil ku tago Imaaraadka,” ayay raacisay Ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay Imaaraadka.
Labada dal ayaa sanadkii hore si rasmi ah xiriirka u sameystay, kaasoo qeyb ka ahaa heshiis uu Mareykanka gar-wadeen ka ahaa oo loo yaqaanay heshiiskii Abraham. Heshiisku waxa uu horseeday heshiisyo badan oo u dhexeeya dalxiiska iyo ganacsiga iyo farsamada casriga ah.
Kulankan ayaa ka soo horjeeda dib u dhac ku yimid wadahadaladii nukliyeerka ee u dhaxeeyay quwadda adduunka iyo Iran.
Xoojinta xiriirka Imaaraadka iyo Israa’iil waa walaac la wadaago oo ku saabsan gaaritaanka Nukliyeerka Iran ee gobolka. Israa’iil waxay sheegtay inay go’aansatay inay ka hortagto Tehraan inay hesho hubka Nukliyeerka, halka Tehraan ay ku adkaysanayso in barnaamijkeeda Nukliyeerka uu yahay ujeeddooyin nabadeed oo keliya.
Todobaadyadii la soo dhaafay, Israel waxa ay taageertay dublamaasiyiinteeda ugu sareysa si ay ula kulmaan xulafada Yurub, Mareykanka iyo Bariga Dhexe si ay ugu riixaan qaab adag oo loo wajaho Iran.